Prof. Samatar Oo Soo Bandhigay Qoddobo aqoonsiga Somaliland fududeyn kara | Duul News International
Prof. Samatar Oo Soo Bandhigay Qoddobo aqoonsiga Somaliland fududeyn kara	Axmed Ismaaciil Samatar ayaa faah faahin ka bixiyey caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan in Somaliland aqoonsi hesho iyo in ay dunida ku yeelato dawlado saaxiib la ah oo kala shaqeeya qadiyada Ictiraaf raadinta ee ay mudada dheer dedaalka weyn ugu jirtey.
Prof. Samatar waxa uu sidaasi kaga hadlay khudbad dheer oo uu Khamiistii ka jeediyey Hotelka Ambassador ee magaalada Hargeysa, halkaa oo ay Wasaaradda Warfaafinta Somaliland qado sharaf ugu samaysay, ka hor intii aanu dalka ka ambo bixin.
Waxaanu tilmaamay in isagu shakhsi ahaan caqabadaha ugu daran ee Somaliland ka hor taagan inay beesha caalamka ka mid noqoto uu u arko in ay sabab u yihiin sadex arimood oo uu ku sheegay qorshe la’aan, meelihii la abaadhi lahaa oo aan la calaamadsan iyo koox dad ah oo qorshahaas fulisa oo aan la hawlgelinin.
Isagoo intaasi raaciyay Prof. Samatar in arrimahaasi u baahan yihiin in dhaqaale la galiyo.
Waxaanu yidhi “Aniga siday ila tahay, Somaliland waxaa ka hortaagan inay beesha caalamka ka mid noqoto saddex qodob oo waaweyn waxaanay kala yihiin:-
1. Somaliland oo mudadaas saddex iyo laabatanka sannadood iyo badhka ah ee ay jirtay aan samaynin Qorshe cad(Strategy Plan) oo Calaamadsan, waayo haddaad dagaal galayso waa inaad samaysato, Qorshihii aad ku dagaal geli lahayd oo dhan. Sidaa darteed waa waajib inaynu samayno oo uu jiro Qorshe cad oo tifaftiran, oo dhinac walba laga eegay si aynu u jebino dood kasta la inagala hor yimaado.
2. Dadkii Qorshahaas qaadayay:- waa in la sameeyo koox dad ah oo Qorshahaas qaada oo wadajir iyo team ahaan u fuliya, laakiin ma socoayso in Wasiir iyo qof keliya oo la socdaa yidhaahdaan anagaa qorshahaas qaadayna.
Markaa dadka qorshahaas qaadaya ee fulinayaa waa inay noqdaan koox aad dhistay, oo uu qof waliba yahay mid waxbartay oo la soo xulay.
3. Meelaha Qorshahaas la gaynayo waa in la yaqaan: Qorshahaas marka la diyaariyo waa in halka la gaynayo ee lala tegayo iyo cida loola tegayona la gartaa. Laakiin hadii aan laba garanayn meesha qorshahaas la geynayo ee ictiraafka laga doonayo, waxba kuu socon maayaan”.
¬¬dhinaca kale Prof. Samatar waxa uu ka digay qorshe Somaliland ka dhan ah oo ay xiligan wado dawlada Soomaaliya, kaas oo uu ku tilmaamay inuu yahay qorshe ay ku carqaladayso xidhiidhka ay Somaliland caalamka la yeelanayso.
Waxaanu dawlada Somaliland iyo shicibkeedaba ugu baaqay inay arintaas iska ogaadaan, si deg deg ahna uga hawl galaan.
Prof. Samatar khudbadiisaas oo aad u dheerayd waxa kale oo uu kaga hadlay arimo faro badan oo ay ka mid yihiin sida loo kobcin karo dhaqaalaha wadanka, ee wax looga qaban karo shaqo la’aanta baahsan ee haysata muwaadiniinta reer Somaliland.
Isaga oo isla mar ahaantaana tilmaamay in arintaas wax ka qabashadeedu u baahan tahay in laga wada shaqeeyo oo aan lagu halaynin xukuumada oo keliya. Sidaas darteedna waxa uu ganacsatada reer Somaliland iyo xukuumadaba u soo jeediyey inay iska kaashadaan sidii ay dhaqaalaha wadanka iyo horumarkiisa uga wada shaqayn lahaayeen, ummadana ay shaqo abuur ugu samayn lahaayeen.
Daawo: Reer Berbera Oo Aan U Kala Hadhin Soo Dhawaynta Gudoomiyaha Cusub Ee Xisbiga WADDANI U Magacaabay Gobolka Saaxil Iyo Degmada Berbera